बिचार दृस्टीकोण Archives - Tufan Media News
स्वेता खड्का/ सुर्खेतकि ४ वर्षिया बालिका ब'लात'कृत भएको यो समाचार सुनेर म नि:शब्द भएकी छु । २४ वर्षिया युवकले एउटी अबोध बालिका माथि गरेको यो कु-कृत्यले मेरो मनमा एक प्रकारको आ'क्रोश, घृणा र क्रो'ध उत्पन्न गराएको छ । त्यो पा'पिको गालामा एक चड्कन हानेर क्र'ोधको यो ज्वालालाई कम गर्ने इक्षा जागेको छ । अहिले हाम्रो समाजम...
विवाह र्यथात प्रेम वा मित्रताका लागि महिला र पुरुषका फरक फरक धारणा हुने गर्दछन् । जसका कारणले उनीहरु एकअर्काका विषयमा जान्न र नजिक हुन अनेकौं प्रयत्न गर्छन् । तर एकले अर्कालाई बुझ्न नसक्दा दुबैको निकटतामा बाधा उत्पन्न हुन्छ । यी १० कुरामा ध्यान दिएमा हुन सक्छ सम्बन्ध बलियो र दिगो- -महिलालाई उनी प्रति तपाईले गरेको माय...
जिबनमा अनगिन्ती मोड हरु आउछन र हरेक मोड बाट फरक मार्ग हरु फरक दिशा तर्फ निस्कन्छन । कतै बाटा हरु मिसीएका पनि हुन्छन तर मान्छे ले कुन बाटो मिसीएको हो र कुन छुटिएको हो भनेर चिन्न सक्दैन । कुन नदी हो र कुन भंगालो हो भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्था मा पनि समय र परिस्थिती अनुसार सबै कुराको सामना गर्दै यात्रा गर्नु पर्दो रहेछ । ...
रोचक– हिन्दू शास्त्रमा जस्तै बौद्ध धर्मसम्बन्धी ग्रन्थमा पनि नारीका चरित्र र स्वभावबारे वर्णन गरिएको पाइन्छ । बौद्ध ग्रन्थमा श्रीमतीका प्रकारलाई विभिन्न सात वर्गमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । भगवान गौतम बुद्ध आफैले सात किसिमका श्रीमतीहरूको बारेमा बयान गरेका हुन् । कुरा गौतम बुद्धले धर्म प्रचार गरिरहेको बेलाको हो । त्यस कालम...
पाेखरा – विवाह र्यथात प्रेम वा मित्रताका लागि महिला र पुरुषका फरक फरक धारणा हुने गर्दछन् । जसका कारणले उनीहरु एकअर्काका विषयमा जान्न र नजिक हुन अनेकौं प्रयत्न गर्छन् । तर एकले अर्कालाई बुझ्न नसक्दा दुबैको निकटतामा बाधा उत्पन्न हुन्छ । यी १० कुरामा ध्यान दिन सके सम्बन्ध बलियो र दिगो हुनसक्छ । -उपहार पाउनु सबैको मन पर्...
काठमाडौँ । अहिले अंगिकृत नागरिकताको वहसले मुलुकमा चर्चा छ । विदेशी वुहारीलाई ७ वर्ष पछि मात्र नागरिकता दिने विषयमा राजनीतिक दलका नेताका विचमा वहस जारी छ । नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलका नेताहरु यो प्रावधानको विपक्षमा छन् भने नेकपाले आफ्नो केन्द्रिय समितिवाट पास गरिसकेको छ । जसपाको सांसद सरिता गिरीले नेपालको नयाँ नक्स...
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बि’ग्रिएको धेरै समाचार प्रकासनमा आएका छन् । श्रीमानको कमाइमा श्रीमातीको मस्ती, विदेशमा श्रीमानलाई सास्ती, नेपालमा श्रीमतिको अर्कैसंग मस्ती, जस्ता हेडलाईनहरु दैनिक जसो समाचारपत्रमा आइरहेका छन् । सुनौलो सपना बोकेर विदेशीएका श्रीमानले पठाएको पैसा नेपालमा बसेर अर्कैलाई ख...
एजेन्सी। सन् २००६ को जुन २६ मा एकै पटक चार वटा बच्चा त्यो पनि विना अप्रेसन जन्माएर चर्चामा आएकी बेलायती नागरिक सबनम सादिकले प्रकृतिमाथि ठूलो चूनौती दिएकी थिईन् । चिकित्सकहरले अप्रेसन बिना बच्चा जन्माउन नसकिने भनिरहेका बेला उनले सामान्य सिजर पछि चार वटा सन्तान एकै पटक जन्माएकी थिईन् । त्यस पछि अर्को पनि एउटा सन्तान गरेर...
कसैका भनाइले तपाईको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यस्ता भनाइबारे हामी यहाँ उल्लेख गरिरहेका छौं । यसलाई मनन गर्नु भयो तपाइँको जीवनमा सफलता पाउन सकिन्छ । हामीले यहाँ यस्तै १० वटा कुराहरु राखेका छौं । १. मानिस जतिसुकै सुन्दर किन नहोस् तर कदर मानिसको गुण स्वभावको नै हुन्छ ।२. दुख र पीडामा साथ दिने साथी प्राण भन्दा ...
नेपालको नयाँ नक्साको बारेमा ऐतिहासिक निर्णय गर्न लागेकै दिन सरकारको वि’रोध गरि प्रदर्शन गर्नु राम्रो होईन – मनिषा कोइराला
काठमाडौं । नेपालको नयाँ नक्साका बारेमा सामान्य ट्वीट गर्दा भारतलाई नै हलचल गराएकी अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले फेरी सोही विषयमा आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेकी छन् । केही दिन अघि मात्र भारतवाट आएकी मनिषाले अहिले सडकमा भएका सरकार विरुद्धको प्रदर्शनलाई लिएर प्रश्न उठाएकी छन् । उनले सरकार विरुद्धको प्रदर्शनका ला...